Wiilka yar ee ninka tujaarka ah u eg - iftineducation.com
iftineducation.com – Fan Xiaoqin waxaa maalin kasta u soo daawasho taga ilaa 50 qof labadii todobaad ee la soo dhaafay, waayo wuxuu wiilkan si layaab leh ugu egyahay aasaasaha shabakadda Internet-ka ganacsiga ee lagu magacaabo Alibaba.
Wiil yar oo 8 jir ah ayaa oo ku nool Koonfur Bari ee wadanka Shiinaha ayaa ka faa’iday inuu u egyahay Mulyineerka lagu magacaabo Jack Ma oo ka mid ah dadka ugu hantida badan wadanka Shiinaha, waayo wuxuu maalin walba helaa dad badan oo ka soo booqda daafaha waddanka.
Fan Xiaoqin (lbidix) iyo Jack Ma (midig)
Wiilkan sumcadda badan ku helay u ekaanshaha maalqabeenka lagu magacaabo Jack Ma wuxuu la’yahay lug oo laga jaray, hooyadiis waxaa ku dhacay cudurka dabaysha, ayaydiis oo 80 jir ah waxay qabtaa cudurka ilawshaha.
Fan XiaoqinImage copyrightZHANG CHENGLIANG
Dadka soo booqdo waxay jecel yihiin inay sawirro ka qaataan Fan Xiaoqin
“Dhamaan wararka ku saabsan Jack Ma-ha yar waa innaan loo arkin mid kaftan ah, in la maalgaliyo dhaqaalaha wiilka waxbarashadiisa ku baxaya waa mid aad u fudud, laakiin in la caawiyo malaayiin caruur sabool ah tasiilaad badan ayaa loo baahan yahay in la adeegsado”.
“Waa arrin wanaagsan in wiilkaygu u egyahay Jack Ma,” ayuu Fan Jiafa u sheegay BBC, laakiin wuxuu sheegay inay dib u dhigeen qaar ka mid ah dalabyada ay heleen.
“Uma doonayo in aaddo hawlaha filimadda oo uu lacag sameeyo, waxaan rajeynaynaa in Xiaoqin uu madaxbanaanaado maalin uun oo uu naftiisa taageero, laakiin waxaan rumaysnahay in waxbarashadu oo kaliya ay naftiisa horumarin karto” ayuu yiri wiilkan aabihiis
Hadda Xiaoqin wuxuu la tacaalayaa in uu Iskoolka aado isla markaana wax qoro,” Waxa kaliya ee aan rajeynayaa waa in uu helaa waxbarasho hagaagsan” ayuu yiri Fan Jiafa.
Zhang Chengliang has offered to send and his brother to a boarding school in
Zhang Chengliang ayaa ballan qaaday in uu iskuulka ka bixin doono Xiaoqin iyo walaalkii oo ku nool Hangzhou
Waxa kaliye ee hadda uu doonayaa wiilkan aabihiis waa “in dalwadda hoose ay caawiso aynna siiso talo”.
Baaritaan lagu hayo weerarkii uu wiilka Soomaaliga ku qaaday Jaamacada Ohio ee Maraykanka